Ngaba uphose igama elithi 'g' bonke ubomi bakho? Olu phononongo luyenza icace | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Mhlawumbi ubusoloko upela igama 'g' bonke ubomi bakho
Ekuqaleni khange siyiqonde loo nto mhlawumbi besipela igama 'g' bonke ubomi bethu Ngubani owayezokusixelela ukuba le leta ingabhalwa njengoko basixelela yona ngoku? Akukho mntu, kodwa kukho isifundo esicacisa izinto.
Masithi kukho iindlela ezimbini ezisemgangathweni zokubhala amagama amancinci 'g', kwaye njengoko kutsha nje kutyhilwe kutshanje, akukho mntu unako ukubhala unobumba u-'g 'kwaoko; ngakumbi into esinokuyibona kwimibhalo yedijithali okanye eprintiweyo.
Sonke beqhele ukubhala unobumba omncinci 'g' ngomsila ovulekileyo, Kodwa kukho enye inguqulelo edla ngokusetyenziswa ngokuchanekileyo kolu hlobo lochwethezo apha kwi-Creativos Online okanye kwezo mibhalo zishicilelweyo. Yiyo kanye le nto iYunivesithi yaseJon Hopkins eye yafumanisa kwaye yabiza ngokuqaqambileyo iDemon kwiMisila ye-'G '.
Into ehlekisayo kukuba kuphela omnye wabantu abangama-38 bayakwazi ukuzoba loo 'g' ngokukodwa. Kwaye okunomdla ngakumbi yayikukuqonda ukuba abathathi-nxaxheba kolu phando abakwazanga kuchonga ukuba yeyiphi kwezi 'g' zilandelayo zichanekileyo.
Ngapha koko bebasi-7 abafumene impendulo echanekileyo kwaye akufuneki nokuba sitsho ukuba yeyiphi echanekileyo. Kwaye ukuba siqala ngomceli mngeni wokuzoba, sifumana olu bhalo luhlekisayo lolo 'g'.
Olunomdla ngakumbi kwesi sifundo sijonga indlela yethu yokubhala kwaye sinokwazi ntoni ngoonobumba abasiqondayo isigama sethu. Ukufuna ukwazi ubuncinci ubuncinci nangakumbi nanini na sigxila kwiifonti ezintsha zokuhombisa iphepha kunye neebhloko ngonaphakade sineMonotype kunye namabhaso ayo ngeyona fonti ipholileyo kwaye inika umdla okwangoku ungabaphosi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Mhlawumbi ubusoloko upela igama 'g' bonke ubomi bakho
I-IKEA ifuna ukuba abantwana abancinci endlwini benze iinqaba zabo, iivenkile kunye nokunye